Xaaf iyo musharixiin kale oo gaaray Teendhada Afisyooni(Sawiro) - HOBYOMEDIA
Home Uncategorized WARARKA MAANTA Xaaf iyo musharixiin kale oo gaaray Teendhada Afisyooni(Sawiro)
Xaaf iyo musharixiin kale oo gaaray Teendhada Afisyooni(Sawiro)
Waxaa goordhaw lagu wadaa in teendhada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho ka bilaabato doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxaana doorashada ku tartamaya musharaxiin badan oo hami ka leh qabashada xilka Madaxweynaha.
Teendhada Afisiyooni ee doorashada ka dhaceyso waxaa gaaray qaar badan oo kamid ah xildhibaanada labada Aqal ee dooranaya Madaxweynaha, waxaa sidoo kale teendhada ku sugan masuuliyiin kala duwan iyo wakiillo ka socda beesha Caalamka.
Qaar kamid ah musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale gaaray teendhada Afidsiyooni, waxaana wali teendhada gaarin oo la sugayaa inyana Musharaxiin kale ay ku jiraan kuwa ugu saameynta badan .
Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ee maanta dhaceysa ayaan wali la saadaalin karin musharaxa kusoo bixi doona, waxaana saacadihii ugu dambeeyay musharaxiinta wadeen olole xooggan oo lagu kasbanayay xildhibaanada.
Previous articleNinka weerarka gaystay ayaa isticmaalayay Kaamirad si uu khadka internedka ugu baahiyo weerarka uu gaysanayay.
Next articleBangiyada Dalka oo iska diiday in Lacago Laaluush ah la dhax mariyo iyo Caqabad soo korortay